Voasakana any Gambia ny Chat Viber? · Global Voices teny Malagasy
Ratsy, hono, satria tsy hividy karatra fahana intsony ny olona
Voadika ny 21 Avrily 2019 21:44 GMT
Ankehitriny, efa ho herintaona taorian'io, mitatitra olana mikasika ny fampiasàna ilay tolotra maimaimpoana ireo mpampiasa Viber. Naneho hevitra mikasika izany ho an'ny vohikalam-baovao Gambia Affairs i Lamin Camara, Sekretera Lefitra Maharitra ao amin'ny Ministeran'ny Teknolojia Fampahalalambaovao:
Na izany aza, nolavin'i Camara teo aloha ny hoe nanakana ilay varavarana aterineto Viber ny governemanta. Raha miresaka mikasika ny The Standard tamin'ny 27 Martsa, nilaza ilay tomponandraikitra fa tsy nosakanana ilay tolotra, nanamarika fa izy tenany aza nampiasa izany andro vitsivitsy teo aloha mba hiresahana tamin'ny fianakaviany any Etazonia.
Miahiahy ireo mpandinika sasany fa, miaraka amin'ireo fanamby ara-toekarena, mametraka olana ara-politika ho an'ny governemanta Gambiana ny sehatra manome tolotra fiseraserana maimaimpoana amin'ny aterineto. Araka ny Index On Censorship, toa nanely feo ny tomponandraikitra sasany tao amin'ny governemanta fa manampy ireo haino aman-jery an-tambajotran'ireo gambiana any ampielezana mba hizara vaovao amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ireo mpanao gazety sy mpikatroka tsy miankina ny fampiasana tolotra toy ireny.
Nilaza i Sam Phatey, mpandinika ny Fitsikilovana:
Araka ny voalaza tao amin'ny Tatitra Avy Amin'ny Olontsotra Mpampiasa Aterineto an'ny Global Voices, tsy afaka niditra tamin'ny Aterineto nandritra ny 48 ora i Gambia tamin'ny herinandro lasa teo, araka ny loharano maro samihafa. Nilaza ny mpahay toekarena, Sidi Sanneh, izay nanao ny asa maha-minisitry ny raharaham-bahiny tao amin'ny firenena tany amin'ny tapaky ny taona 2000 tany, fa vokatry ny ezaky ny governemanta amin'ny fanakanana ireo fampiharana firesahana sy fiantsoana, izay ahitana ny Viber, ilay fahatapahana.
Nandà ny filazana azy ho manakana ny fidirana amin'ny Viber ny Minisitry ny Teknolojian'ny Fampahalalambaovao ao Gambia, mampifandray ilay olana amin'ny faharatsian'ny fifandraisana an-tambajotra.